China LEDD500 / 700 Ceiling LED LED Double Head Hopitaly hazavana ara-pahasalamana miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy mari-pahaizana CE | Wanyu
LEDD500 / 700 valindrihana LED hazavana fitsaboana roa loha miaraka amin'ny mari-pahaizana CE
LEDD500 / 700 dia manondro hazavana fitsaboana dobo LED doble avo roa heny.
Ny trano maivana amin'ny hopitaly dia vita amin'ny firaka aliminioma misy takelaka aluminium matevina ao anatiny, izay tena manampy amin'ny famafana ny hafanana. Ny takamoa dia takamoa OSRAM, mavo sy fotsy. Ny efijery mikasika LCD dia afaka manitsy ny fahazavana, ny mari-pana amin'ny loko ary ny CRI, izay azo ovaina amin'ny ambaratonga folo. Ny sandry mihodina dia mandray sandry alimina maivana ho an'ny fametrahana toerana marina. Misy safidy telo ho an'ny sandry lohataona, izay mety amin'ny efitrano fandidiana misy teti-bola samihafa. Azonao atao koa ny manatsara ny fanaraha-maso ny rindrina, ny rafitra bateria backup, ny fakan-tsary ary ny monitor.
1. Fanazavana lalina
Ny fahazavana ara-pitsaboana dia manana fahasimbana maherin'ny 90% eo amin'ny farany ambanin'ny sehatry ny fandidiana, noho izany dia ilaina ny fanazavana be mba hiantohana ny jiro milamina. Ity hazavana ara-pitsaboana dôma ity dia afaka manome fanazavana hatramin'ny 160,000 ary hatramin'ny halalin'ny fahazavana 1400mm.
2. Fampisehoana malalaka amin'ny aloka
Tsy mitovy amin'ireo mpamokatra hafa izay mividy solomaso tsotra, dia manambola be izahay mba hampivelatra ny mason-tsivana tsy manam-paharoa amin'ny fampisehoana condensing tsara kokoa. Volam-boasary LED misaraka miaraka amin'ny solomaso misy azy, mamorona sahan-jirony manokana. Ny fipetrahan'ny tara-pahazavana hafa dia mahatonga ny toerana maivana ho mitovy sy mampihena be ny tahan'ny aloka.
Ny mari-pana amin'ny loko, ny hamafin'ny jiro ary ny fanondroana loko ny jiro ara-pitsaboana dia azo ovaina miaraka amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD.
4. Hetsika Maimaimpoana
Ny 360 iraisana iraisana mamela ny lohan'ny hazavana ara-pitsaboana hihodina manodidina ny axis-ny, ary manome fahalalahana bebe kokoa amin'ny fivezivezena sy ireo safidy fametrahana tsy voafetra ao amin'ny efitrano ambany.
5. Fanomezana herinaratra fanovana marika malaza
Misy karazany roa ny famatsian-tsolika mifamadika, afa-tsy ny mahazatra, ny asa maharitra ao anatin'ny faritra AC110V-250V. Ho an'ireo toerana tena tsy mitombina ny herinaratra dia manome fitaovana famatsiana herinaratra malalaka miaraka amina hery fanoherana mahery vaika izahay.
6. Miomàna amin'ny fampiasana amin'ny ho avy
Raha mila manavao ny jiro fakan-tsary amin'ny ho avy ianao dia azonao atao ny mampahafantatra anay mialoha, ary hanao fanomanana hidirana mialoha izahay. Amin'ny ho avy dia tsy mila afa-tsy fakantsary amin'ny fakan-tsary ao anatiny ianao.
7. Safidy safidy safidy
Izy io dia azo ampiarahina amin'ny fakantsary sy monitor namboarina, tontonana fanaraha-maso ny rindrina, fanaraha-maso lavitra ary rafitra famerenana bateria.
Previous: LEDD620620 Ceiling LED LED Dome Dome Fitaovana fitsaboana miaraka amin'ny fanaraha-maso ny rindrina
Manaraka: Jiro fandidiana azo esorina amin'ny halotra DL500 amin'ny halogen
LEDB200 LED Wall mitaingina karazana fitsaboana Examinati ...